विचार/ब्लग Archives - Current Nepal News
असोज १९,काठमाडौँ। तीन पार्टीबीचको एकता घोषणा निकै ठूलो प्रयासबाट सम्भव भएको हो । त्यसो त ०६३ सालमै मैले प्रचण्डजीलाई एमाले र माओवादीबीच एकताको प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यसवेला उहाँले भन्नुभो, ‘त्यसो भए तपाईंले आफ्नो पार्टीमा कुरा राख्नुस् र आउनुस् ।’ मैले प्रचण्डजीको प्रस्ताव तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसमक्ष जस्ताको तस्तै राखेँ । उहाँले हुन्छ, लौ अघि बढ्नुस् भनेपछि मैले यही कुरा फेरि प्रचण्डजीलाई सुनाएँ । त्यसपछि प्रचण्डजीले भन्नुभो– एकता प्रस्तावबारे पहिले दुवै पार्टीबाट [विस्तृतमा...]
एजेन्सी । दूलहीलाई कार लगायतका विभिन्नमा चढाएर बिदाई गरिन्छ । तर संसारमा कहिले काँही निकै रोचक घटना घट्ने गर्दछ । जुन सुन्दा निकै रमाइलो लाग्ने गर्दछ । यस्तै एक रोचक घटना चीनमा घटेको छ । चीनको बीजिंग गाउँमा बिवाह पश्चात दुलहीलाई सुँगुरमा चढाएर बिदा गरिएको छ । दुलही बोक्ने सुँगुर झन्डै ६३० केजीको रहेको बताईएको छ । उक्त सुँगुर दुलहाले आफ्नो दुलही बोक्न चाहिने भन्दै ३ वर्षदेखि पाल्दै आएका थिए [विस्तृतमा...]
सुरेन्द्र सुमन उसो त ‘कहिल्यै अस्पताल जान नपरोस्’ भनेर कामना गर्ने म मात्रै एक्लो होईन हुँला । जिन्दगीका धेरै बाध्यताहरु मध्ये अस्पताल जानैपर्ने बाध्यतासँग मलाई घृणा छ, त्यति घृणा मेरा दुस्मनहरुलाई पनि गर्दिन म । केही दिन अघिको कुरा हो, श्रीमतीको पेटमा असमान्य समस्या देखिएपछि जाजरकोट अस्पतालको पुर्जी काट्ने लाईनमा पालो पख्र्यौ । साथमा अढाई वर्षकी छोरी काव्या पनि थिइन । पुर्जी काट्ने फाँटमा होचो कदको सुख्खा अनुहारमा आँखा [विस्तृतमा...]
उज्ज्वल राम घिमिरे हिजो ने.वि.संघको स्थापना लोकतान्त्रिक समाजवादी मुल्य मान्यतामा स्थापित समाज निर्माणका लागि भई रहेको संघर्षको मैदान बाट भएको हो । तत्कालिन पञ्चायती अन्धकारको समयमा जनताले, लोकतन्त्रले कम्तिमा व्यक्तिको जिउ, धन र स्वतन्त्रतामाथि हुन सक्ने गैरन्यायिक हस्तक्षेपलाई रोक्छ जसबाट मात्र राज्यको नितिको जनतामा परेको असर र आगामि कदमका बारेमा निष्पक्ष मुल्याङ्कन हुन सक्छ भन्ने पनि बुझि सकेका थिएनन् । त्यसैले व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास तथा समग्र राष्ट्रको विकासका लागि [विस्तृतमा...]
बर्षा शाह बिहानी मै फोनको घण्टी बज्यो । दिदि नमस्ते म बर्षा बहिनी हो । मैले हेलो मात्र के भनेको थिए । उताबाट आफुलाई परिचय गराउदै उनि बोलिन् । एक छिन् त म छक्क परे किन कि मेरो आफ्नो नाम पनि बर्षा नै थियो । कसलाई खोजेको हो र भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले मलाई हजुरको नम्बर सरोज दाईले दिनु भएको हजुरसँग भेट्ने भन्नु भएको छ । मलाई तपाईले चिन्नु हुन्छ र ? त्यसरी त चिनेको छैन् । तर हजुर धेरै राम्रो हुनुहुन्छ रे आफ्नो कुरा राख्नु भटेर भन्नु भएको छ । दिदि पिलिज म निकै पिडामा छु । मलाई आज भेट्नु न पिलिज । [विस्तृतमा...]
धनवीर दाहाल तत्कालिन सात राजनितिक दल र बिद्रोही माओबादीले अघोषित रुपमा कार्यगत एकता गरी शाही निरंकुशताका बिरुद्धमा आन्दोलन चलाएका थिए । नेपालमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्नका लागी देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको आँधीबेहरी चलिरहेको थियो । १९ दिने जनआन्दोलनले रुकुमलाई पनि निकै तताएको थियो । २०६३ बैसाख ५ गते रुकुमको सदरमुकाम नजिकै रहेको सल्ले मा तत्कालिन माओबादीले बम बिस्फोट गरायो । ६ गते सदरमुकाम खलंगा बजार [विस्तृतमा...]
बर्षा शाह मैले धेरै साथिहरुबाट सुनेको थिए । नगरकोट निकै रमाइलो छ भनेर । म दाडमा हुदा पनि नगरकोटको बारेमा चर्चा भएको सुने गथ्र्ये । नगरकोटको प्रकृतीको बयान मैले सुनेको थिए । मैले कहिले काहि सोच्ने गथ्र्ये । साची कस्तो होला नगरकोट । म सानै देखी प्रकृतीसग निकै रमाउने मान्छे हू । हुन त प्रकुतीसग नरमाउने मान्छे सायद नै हुन्छन् होला । तर पनि मलाई आफू अलि बढी प्रकृती प्रेमी छु जस्तो लाग्छ । केही बर्ष यता म काठमाण्डौमा बस्न थाले, काठमाण्डौको मेरो बसाइ रहर, बाध्यता के हो ? मैले आफै अहिले सम्म बुझन् [विस्तृतमा...]
खेमा बस्नेत उसका लागि विवाह एउटा सानो खेल थियो । यो समाजका हरेक पुरुषका लागि विवाह एउटा सानो खेल हो, उसले खेल खेलिसकेपछि ‘गल्ती भयो’ भनेर फेरि सानदार जीवन जिउन सक्छ , तर महिलाका लागि विवाह खेल होइन, जीवनभरि उम्किन नपाउने जेल हो । कुनै केटासँग बोलियो र हाँसियो भने पनि बिग्रिएकी केटीको संज्ञा दिन्छ समाजले । प्रेमको चक्करमा परेको थाहा भयो भने त बाँकी के रहन्छ र रु त्यसैले म पुरुषदेखि सक्दो टाढा रहेँ । सँगै पढ्ने केटा साथीसँग पनि एउटा दूरी बनाएर बसेँ । [विस्तृतमा...]
बर्षा शाह स्टुडियोभित्र थिएँ । सायद फोन मेरै बजिरहेको थियो । त्यो बेला घोराहीस्थित झरना एफएममा कार्यक्रम प्रस्तोता थिएँ । फोन धेरै बजे छ क्यारे, प्राविधिक खगेन्द्रले फोन बजिरहेको संकेत गरे । स्टुडियोभित्र बोलिरहेकाले फोन उठाइदेऊ भन्ने संकेत उनलाई दिएँ । गीत बज्ने पालो आएपछि स्टुडियोबाट बाहिर आएँ । भाइले तपाईंको साथीको फोन आएको र तुरुन्त फोन गर्नु भन्ने सुनाए । फोन सेटमा आँखा पु¥याएँ । मित्र दीलिपको नम्बर देखेँ । केही भए छ कि ? तुरुन्त फोन गर्न भन्यौ । मनमा सोच्दै उसलाई फोन गरेँ । फोनको एक [विस्तृतमा...]